September 2020 – " कञ्चनजंगा News "
लामो आयु चाहाने हो भने नियमित रुपमा गर्नूस् यस्ता काम
No Comments on लामो आयु चाहाने हो भने नियमित रुपमा गर्नूस् यस्ता काम
एजेन्सी । तपाईँ लामो समयसम्म बाँच्न चाहानु हुन्छ भने तपाईँको हिंडाईको गतिलाई बदल्न जरुरी छ । यदि विस्तारै हिड्ने बानी छ भने अबदेखि आफ्नो हिडाई धेरै कम भैरहेको महसुस गरी छिटो हिड्ने प्रयास गर्नुहोस् । एक युनिभर्सिटीले गरेको सोधबाट वैज्ञानिकहरुले तिव्रगतिमा हिड्दा कुनै पनि कारणले हुने मृत्यु २४ प्रतिशत कम हुने सम्भावना पत्ता लगाएका छन् ।
वैज्ञानिकहरुले हिडाईँले छिटो हुने मृत्युबाट धेरै हदसम्म कम हुने दाबी गरेका छन् । विस्तारै हिड्नेको तुलनामा औसत हिड्नेले कुनै कारणबाट हुने मृत्युलाई २० प्रतिशत सम्म कम गर्न सक्छ । जब कि छिटो हिड्नेले २४ प्रतिशत सम्म कम हुन्छ ।
एक सोध अनुसार औसत गतिमा हिड्ने ६० वर्ष वा त्यो भन्दा धेरै उमेरका व्यक्तिहरुमा मुटु सम्बन्धि रोग हुने पनि सम्भावना भएकोले मृत्युको जोखिम ४६ प्रतिशत कम हु्न्छ । भने छिटो हिड्ने व्यक्तिको जोखिम ५३ प्रतिशत कम हुन्छ ।
वैज्ञानिक एमैनुएलको अनुसार सामान्यतया पाँच देखि सात किलोमिटर प्रति घन्टा रफ्तारमा हिड्नु पर्छ । यदि तपाइँ हिंड्दा हिंड्दै यही गतिमा रोकिन चाँहेमा सास फुल्छ र पसीना आउँछ । दिनहुँ मात्र १५ मिनेट हिडेमा पनि शरीरलाई स्वस्थ्य राख्न सकिन्छ । ३० वर्ष भन्दा धेरै उमेरका मानिसहरु दैनिक कम से कम १५ मिनेट हिड्नु धेरै आवश्यक हुन्छ ।
पैदल हिड्दा तौल पनि कम हुन्छ । नियमित रुपमा थोरै मात्र हिड्दा पनि शरीरमा जमेको एक्ट्रा फ्याट पनि कम हुन्छ । एक सोधका अनुसार पैदल नहिड्नेको तुलनामा हिड्नेहरु रचनात्मक हुन्छन् । त्यसैले आजैबाट पैदल हिड्न सुरु गर्नुृहोस् ।
नेपाल चीन सीमाः हुम्लानजिकै बनाइएका भवन दुई देशकै सर्वसाधारणकालागी
No Comments on नेपाल चीन सीमाः हुम्लानजिकै बनाइएका भवन दुई देशकै सर्वसाधारणकालागी
काठमाण्डौ । काठमाण्डौस्थित चिनियाँ दूतावासले नेपाल चीन सीमा क्षेत्र नजिकै आफ्नो देशको भूमिमा निर्मित भवनहरू स्थानीय बासिन्दाकालागी भएको बताएको छ । नेपालको स्थानीय तहका अधिकारीहरूले विगतमा आफूहरूले उपभोग गरिरहेको हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिका वडा नम्बर ६ मा चिनियाँ पक्षले यस वर्ष नौसहित ११ वटा भवन बनाएको बताएपछि यसै साता हुम्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा एउटा टोलीले उक्त क्षेत्रको स्थलगत अध्ययन गरेको थियो ।
तर काटमाण्डौस्थित चिनियाँ दूतावासले नेपाल र चीनबीच कुनै सीमा विवाद नरहेको र ती भवनहरू चिनियाँ भूमिमा नै बनेको दाबी गरेको छ । बुधवार नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले ती भवनहरू नेपाली भूभागमा नबनेको सरकारी अभिलेखहरूले प्रमाणित गरेको जनाएको थियो । मन्त्रालयका अनुसार उक्त स्थानमा भवन बनाइएका समाचार प्रकाशमा आएपछि विक्रम संवत् २०७३ सालमा नेपालको अन्तरमन्त्रालय टोलीले स्थगलगत अध्ययन गरी सीमाभन्दा करिब एक किलोमिटर भित्र चिनियाँ भूभागमा भवन बनेको निष्कर्ष निकालेको थियो ।
काठमाण्डौस्थित चिनियाँ दूतावासका प्रवक्ताले ती भवनहरू सर्वसाधारणका लागि बनाइएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । यसअघि नाम्खा गाउँपालिकाका अध्यक्षले व्यापारिक प्रयोजनकालागी ती भवनहरू बनेको एक चिनियाँ प्रहरीले आफूलाई बताएको जानकारी दिएका थिए । यस विषयमा स्थानीय जनप्रतिनिधिले विगतमा आफूहरूले उपभोग गरिरहेको क्षेत्रमा ती भवन बनेको र विगतमा सडक निर्माण, पशुहरूको चरनलगायतका प्रयोजनका लागि आफूहरू त्यसतर्फ बिना अवरोध आउजाउ गरेको बताइरहेका छन् ।
नाम्खा गाउँपालिकाको वडा नम्बर ६ का अध्यक्ष पाल्जोर तामाङका अनुसार केही वर्षअघि दुईवटा मात्रै भवन बनाउँदा स्थानीय चिनियाँ अधिकारीले पशु क्वारन्टीनका लागि ती संरचनाहरू निर्माण गरिएको जानकारी दिएका थिए ।
No Comments on कपिलबस्तुकी ६ बर्षकी जियाको दुनिया चकित पार्ने क्षमता, ५ मिनटमै दिन्छिन् ५०० प्रश्नको उत्तर (भिडियो हेर्नुस्)
काठमाडौ । सामाजिक सञ्जालमा अहिले निकै चर्चित नाम हो जिया भुषाल । उनी ६ वर्षकी भइन् । कपिलवस्तुको विरपुरकी यि ६ वर्षकी नानीसंग अद्भुत क्षमता छ । उनीसंग ज्ञानको भण्डार नै छ भनेपनि हुन्छ । एउटा सानी नानीले हरेक प्रश्नको जवाफ दिन सक्छिन् । उनलाई सामान्य ज्ञान वारे राम्रो ज्ञान छ । नेपालको राजनीतिक ब्यक्तित्व देखि विश्वका हरेक कुरा उनलाई थाहा छ । उनी एक छिन पनि नसोचेर फटाफट प्रश्नको उत्तर दिन्छिन् । आफुलाई बुवाले सिकाएको बताउने उनी
नेपालमा कम पानी पर्ने ठाउँ देखि खुट्टामा कान हुने जिव सम्म उनलाई ज्ञान छ । नेपालका सबै क्षेत्रको ज्ञान मात्र होइन उनीसंग विश्वकै धेरै कुराको बारेमा थाहा छ । कहिल्यै रात नपर्ने देश कुन हो ? भनेर प्रश्न गर्दा पनि झट्ट उत्तर दिने उनले नेपालमा मात्र पाइने फलको नाम के हो भन्दा पनि उनीसंग उत्तर छ ।
उनलाई विश्वको सबैभन्दा सानो देशको नामका बारेमा पनि थाहा छ । फेसवुक कसले बनाएको हो ? भन्दा पनि उनीसंग उत्तर छ । नेपालको सबैभन्दा धनी मानिसका बारेमा प्रश्न गर्दा उनले नअलमलिई जवाफ दिने गरेकी छन् । उनीसंग कम्प्युटरको हार्डडिक्स भने पनि हुन्छ । जुनसुकै कुरा सोध्नुस् उनीसंग सबैकुराको ज्ञान छ ।
No Comments on १२ राशिका लागि धन प्राप्त गर्ने १२ उपायः तपाईको कुन राशि ?
No Comments on तातोपानी नाका असोज १९ गतेबाट खुल्ने
ब्रोइलरका चल्ला मेहन्दी लगाएर ‘लोकल’ भन्दै बेच्ने भारतीय प’क्राउ
No Comments on ब्रोइलरका चल्ला मेहन्दी लगाएर ‘लोकल’ भन्दै बेच्ने भारतीय प’क्राउ
काठमाडाैं : अबैध रुपमा भारतबाट ब्रोइलरका चल्ला भित्र्याएर मेहन्दी लगाएर ‘लोकल’ भन्दै म’हङ्गो दरमा बिक्री गर्ने भारतीय नागरिकलाई प्रहरी प’क्राउ गरेको छ ।
ब्रोइलर चल्लालाई विभिन्न रङ (मेहेन्दी) लगाएर लोकल, कोइलर, गिरिराजका चल्ला भन्दै विक्री वितरण गरेको नौलो घ’टना फेला परेको छ । काठमाडाैँकाे कंलकीमा नक्कली लोकल कुखुराको बि’गबिगि मच्चिए पछि प्रहरीले सो विषयमा अनुसन्धान सुरु गरेको थियो । बोईलर कुखुराको चल्लालाई कालो रातो मेहेन्दी र रङ्ग लगाएर लोकल भन्दै महंगोमा विक्री गर्ने समूह सक्रिय भएपछि कंलकी र काठ क्षेत्रमा यस्तो बि’गबिगी मच्चिएको पाइएकाे हो ।
आज महानगरीय प्रहरी वृत्त कालिमाटीको प्रहरी टोलीले काठमाडौँ महानगरपालिका १४ कलङ्कीबाट चल्लालाई रङ लगाउँदै गर्दा उनीहरुलाई प’क्राउ गरेको महानगरीय प्रहरी परिसरका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक श्यामलाल ज्ञवालीले जानकारी दिए ।
प’क्राउ पर्नेमा भारतीय नागरिक प्रेमसिलादेवी जययसवाल, वकील खान, सुनिता जयसवाल, चन्दादेवी शाह रहेका छन् । उनीहरुले चितवन लगायत विभिन्न जिल्लाबाट ब्रोइलरको चल्ला ल्याइ रङ लगाएर लोकलको मुल्यमा विक्री गर्ने गरेको खुलेको छ ।
कम मूल्यका चल्लालाई रङ लगाएपछि प्रतिगोटा रु १५० सम्ममा विक्री गर्ने गरेको खुलेको छ । विशेष सूचनाको आधारमा उनीहरुलाई प’क्राउ गरी ठ’गी मु’द्दामा कानुनी अ’नुसन्धान शुरु गरिएको जनाइएको छ ।
प्रहरीले उनीहरुको साथबाट यसरी रङ लगाएका झण्डै चार हजार र रङ लगाउने तयारीमा राखिएका २४ हजार चल्ला समेत बरामद गरेको छ ।
प्रहरीले प्रयोग गरिएका मेहन्दीका खोल र प्रयोग गर्न राखिएको मेहेन्दीका पोका समेत बरामद गरेको छ ।
यसरी बोईलर कुखुरालाई मेहँन्दी लगाएर विभिन्न किसिमको कृतिम रङ्ग लगायदै लोकल बनाउदै बिक्री गर्दै आएका भारती नागरिकहरूलाई महानगरीय प्रहरी बृत्त कालीमाटीले पक्राउ गरेको छ ।
सेतो चल्लालाई कालो रातो रङ्ग लगाउदै गर्दा काठमाडौं कंलकी एरियाबाट प्रेम सिला देवी जैसवाल, वकिल खान,सुनिता जैसवाल,चन्दा देवी शाह कालीमाटी बृत्तले पक्राउ गरेका छ ।
करिव अन्दाजी २० हजार गोटा तयारी तथा रङ्ग लगाउन बाकी चल्ला बरामद गरिएको महानगरीय प्रहरी बृत्त कालीमाटी प्रमुख डिएसपी अपिल राज बोहराले बताउनुभयो ।
प्रहरीले कुल २८ हजार ६ सय चल्लाको बरामद गरेको छ । जस मध्ये ३ हजार ६ सय ५० चल्लामा कलर गरिएको हो । बोईलर भन्दा लोकल वा गिरिराज चल्ला महङ्गोमा विक्रि हुदो रहेछ त्यहि भएर चल्ला ल्याउदै महङ्गोमा गरिहेको पाइयो, उहाँले भन्नुभयो ।
उक्त गिरोहले राजधानीका विभिन्न क्षेत्र लोकल,गिरिराज,कोईलर भन्दै १० रूपयामा गरिद गरि ल्याएको चल्ला दुई सय देखि ३ सय सम्म विक्रि वितरण गर्दै आईरहेका थिए ।
No Comments on प्रमोद र ऋचाकाे मार्मिक अभिनयसहित ‘छाती चिरेर’ सार्वजनिक (भिडियोसहित)
काठमाण्डौ : गायक प्रमोद खरेलको वियोगात्मक म्युजीक भिडियाे सहितकाे नयाँ गीत छाती चिरेर सार्वजनिक भएको छ ।
हरि लम्सालको संगीत रहेको यो गीत गायक खरेलले आफ्नो युट्युब च्यानल मार्फत सोमबार सार्वजनिक गरेका हुन् । यो गीतको भिडियोमा सकारात्मक प्रतिक्रियाहरु आइरहेका छन । भिडियो, संगीत र गायन राम्रो भएको मानिएको यो गीतलाई केहीले गायक खरेलकै उत्कृष्ट गीतसमेत भनेका छन्
खुसीको खबर रुसले साढे दुई करोड डोज कोरोना भ्याक्सिन नेपाललाई दिने
No Comments on खुसीको खबर रुसले साढे दुई करोड डोज कोरोना भ्याक्सिन नेपाललाई दिने
काठमाडौं, १३ असोज । लामो समयदेखि रसियाले विश्वमै सबै भन्दा पहिले कोरोना भाइरस (कोभिड-१९)विरुद्धको भ्याक्सिनको विकास गरेको दाबी गर्दै आएको छ । उही रसियाले कोभिड-१९ विरुद्धको दुई करोड पचास लाख डोज भ्याक्सिन नेपाललाई दिने भएको छ ।
उक्त ‘स्पुतनिक-५’ नामक भ्याक्सिन नेपाल पठाउन सम्झौता भइसकेको पनि अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यम रोयटर्सले जनाएको छ । रसियन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट फन्ड र नेपालको औषधि उत्पादक कम्पनी ट्रिनिटी फर्मास्युटिकल्सकबीच साढे २ करोड डोज रुसी भ्याक्सिन ‘स्पुतनिक-५’ नेपाल ल्याउने सम्झौता भएको रोयटर्सले जनाएको हो ।
त्यस्तै, फन्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरिल डिमिट्रेभले ट्रिनिटीसँग सम्झौता भएको र नेपालका ९० प्रतिशत जनसंख्याका लागि पुग्ने गरी भ्याक्सिन उपलब्ध गराउने जनाएका छन् ।
त्यसोत, ‘स्पुतनिक-५’ भ्याक्सिन नेपालमा मात्र नभएर एसिया, मध्य पूर्व, ल्याटिन अमेरिका, यूरोप र सीआईएसका ५० भन्दा बढी देशहरुलेसमेत माग गरेका दाबी गरिएको छ ।
त्यस्तै, यसअघि आरडीआईएफले मेक्सिकोसँग ३२ मिलियन डोज, ब्राजिलसँग ५० मिलियन डोज, भारतसँग १०० मिलियन डोज र उज्बेकिस्तानसँग ३५ मिलियन डोज भ्याक्सिनको लागि सम्झौता गरिसकेको बताइएको छ ।
रुसको स्वास्थ्य मन्त्रालयमा ११ अगस्टमा विकास भएको यस खोपलाई मानव एडिनोभाइरल भेक्टर प्लेटफर्ममा आधारित कोरोनाविरुद्धको विश्वमा दर्ता भएको पहिलो खोप भएको दाबी गरिएको छ ।
सुत्नुअघि बिर्सिएर पनि आफु सुत्ने ओछ्यान् वरिपरि नराख्नुस यी ७ प्रकारका चीज, नत्र पछुताउनु होला!
No Comments on सुत्नुअघि बिर्सिएर पनि आफु सुत्ने ओछ्यान् वरिपरि नराख्नुस यी ७ प्रकारका चीज, नत्र पछुताउनु होला!
No Comments on यातायात व्यवसायीले बढी भाडा लिँदै
काठमाडौ । गुल्मीमा यातायातका साधनले सरकारले तोकेभन्दा बढी भाडा लिन थालेका छन । कोरोना महामारी र सरकारले भाडा बढाएको बहानामा उनीहरुले यात्रुहरुसँग तोकिएभन्दा बढी भाडा असुल्दै आएका छन् । अहिले ग्रामीण भेगका अधिकांश सडक बिग्रिएका छन् ।
बस, हाइस जस्ता बढी यात्रु बोक्ने सवारी पूर्ववत् ढङ्गले चल्न नसक्दा जीपलगायतका साना गाडीहरुले मनलाग्दी भाडा लिने गरेको यात्रुहरु बताउँछन् । जिल्लाको मुसिकोट नगरपालिकाको वामीबाट सदरमुकाम तम्घाससम्मको भाडा रु ३७० तोकिएको भएपनि जीपले रु ७०० लिएको स्थानीयवासी हिमा रानामगरले बताउनुभयो । धुर्कोट गाउँपालिका­७ वाग्लाकी लक्ष्मी घिमिरे भन्नुहुन्छ, “सवारी साधनले बढी भाडा लिएपनि सवारी साधनमा सरकारले तोकेको सामाजिक दूरी कायम भएको छैन ।”
यातायात व्यवसायीहरुको छाता सङ्गठन गुल्मी यातायात व्यवसायी सङ्घका कार्यालय प्रमुख डोरबहादुर कुँवरले यात्रुहरुलाई टिकट काटेर मात्र सवारी प्रयोग गर्न आग्रह गर्नुभयो । “सरकारले ५० प्रतिशतभन्दा बढी भाडा लिन नपाउने गरी नियम बनाएको छ, काउन्टरबाट सोही शुल्कमा टिकट दिन्छौँ ।”
अत्याधिक वर्षाका कारण जिल्लामा बिग्रिएका सबै सडकको मर्मत नहुँदा कतिपय ठाउँमा जिप पनि जान सकेका छैनन् भने अधिकांश ठाउँमा बस र हाइस चल्न सकेका छैनन् । सवारी साधनले बढी भाडा लिएको गुनासो आएपछि ट्राफिक प्रहरीले अनुगमन शुरु गरेको छ । जनशक्ति कम भएकाले सबै ठाउँमा अनुगमन गर्न समस्या परेको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी प्रमुख जगन्नाथ पाण्डेले बताउनुभयो ।